I-Apple Podcasts ayilungile njengoba inkampani ifuna sikholwe | Ngivela ku-mac
Ubuwazi ukuthi i-Apple inesicelo sayo sokulalela iPodcast? Cishe ubuyazi futhi mhlawumbe uma ungomunye walabo abalalela lolu hlobo lokuzijabulisa okuzwakalayo, ungasebenzisi uhlelo lwe-Apple. Ukubuyekezwa kwayo bekulokhu kuphansi kakhulu. Kuze kube sephuzwini lokuthi inkampani kwadingeka iyivuselele futhi yenze intuthuko, kodwa namanje abasebenzisi abanayo imibono emihle ngayo. Kodwa-ke, isikhathi esingaphansi kwenyanga, kubonakala sengathi ukubuyekezwa kushintshile, kodwa ungenzi iphutha, uhlelo lokusebenza aluthuthukile.
Uma ulanda uhlelo lokusebenza ku-App Store, ungalukala, uthole izinkanyezi ezifika ezinhlanu (kusuka kweyodwa) futhi ushiye amazwana. Lokhu kusiza onjiniyela ukuthuthukisa uhlelo lokusebenza ngokwalo noma kubonisa ukuthi basendleleni efanele. Kodwa futhi kuyasiza kubasebenzisi abafuna izinhlelo zokusebenza ezifanayo futhi baqondiswa imibono yabanye. Uhlelo lokusebenza lwe-Apple's Podcasts lwalunezinkanyezi ezingu-1.8. Akukuhle neze. Nokho, isikhathi esingaphansi kwenyanga, isithole isilinganiso sezinkanyezi ezingu-4.6. Kodwa akugcini lapho, Isukile ekubeni nezibuyekezo ezingaba yi-1000 yaba nezingaphezu kuka-18.000 XNUMX. Ngani?
Isizathu ngokusobala ingoba uma umsebenzisi elalela ama-Podcasts ngalolu hlelo lokusebenza, uthola isaziso sokukala lokho akuzwile. Ngokunengqondo, cishe njalo angamavoti avumayo ngoba umsebenzisi okhethe ukuthi alalele ini. Uma ngithanda uQueen futhi ngikhetha uQueen, ngizokwazisa engikuzwile, ngoba kwenzeka okufanayo. Lokhu kuhlola kubonakala kuboniswa ekuhlolweni kohlelo lokusebenza. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ngokungazi noma ngokuzithandela, akwaziwa, inkampani yaseMelika inyusa amanani entengo yohlelo lokusebenza okushiya okuningi okufanele ukwenze.
Kubonakala sengathi lokhu akwenzeki uma usebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ukulalela ama-Podcast. Konke kuyinqaba kakhulu, akunjalo?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » I-Apple Podcasts ayilungile njengoba inkampani ifuna sikholwe
Idokhumentari ethi The Line iphoxa okokuqala ngqa ngokungathathi ubungozi